Google Chromecast waa ciyaaryahan digital warbaahinta in kuu ogolaanayaa inaad sii qulquli MP4 , WebM, MPEG-DASH, Streaming siman, iyo HTTP Live Streaming (HLS) qaabab video on your Television Qeexid Sare (HDTV). Waxay u baahan tahay xidhiidh ka wireless la isticmaalayo internetka ama shabakad xidhan kombiyuutarka, kiniin ah, ama casriga ah. Waxaad ka ciyaari kara content multimedia kala duwan, laakiin kaliya Google Kabka taageeray qaabab si toos ah huleeshay karo.
Haddii aad jeclaan lahaa inuu ka ciyaaro qaabab aqlka, sida MKV , VOB, FLV iyo AVI , waxaad u baahan doontaa si aad u hesho codsiga sida Wondershare Video Converter , si ay u sii qulquli filimada, bandhigyada TV, iyo music video la qaabab aqlka. In this article, waxaad ku baran doontaa taageeray iyo aqlka qaabab video iyo sida aad u sii qulquli karaa adiga oo isticmaaleya isticmaale Chromecast media player.
Qeybta 1: Chromecast ay taageerayaan iyo aqlka qaabab Video
Qeybta 2: Saddex Siyaabaha la il ay taageerayaan Videos
Qeybta 3: Hababka Isbarbar u Streaming taageerayaan Videos
Qeybta 4: Saddex Siyaabaha la il aqlka Videos
Qeybta 5: Hababka Isbarbar u Streaming aqlka Videos
The default Chromecast qaabab video yihiin MP4 iyo WebM. Waxa kale oo ay taageertaa MPEG-DASH, Streaming siman, iyo HTTP Live Streaming (HLS) video files. Dhammaan qaabab kale video yihiin aqlka. Macluumaadka soo socdaa waxay bixisaa horudhac kooban oo ah qaabab ay taageerayaan iyo aqlka.
Standard taageeray Chromecast qaabab video ka mid ah:
MP4 - MPEG 4 ama MP4 video files isticmaalaa kordhin .mp4 caadiga ah. Waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu kaydin jiray video iyo files audio.
WebM - An qaab video furan yahay internetka ee qofkasta u oggolaanaya inay sii qulquli video iyo maqal ah codecs.
Qaar ka mid ah qaabab video aqlka ka mid ah:
AVI - AVI (Audio Video Interleave), qaabka ugu caamsan ee xogta audio / video kombuutarka, waa qaab multimedia weel la video iyo maqal ah.
MKV - The Matroska Warbaahinta Container heysta video, audio, sawirka, ama kuwan raadkaygay Cinwaan in mid ka mid ah faylka.
FLV - Flash qaabab video files yihiin video in ay yihiin barta internetka isticmaalaya Flash Adobe ka Player.
MOV - MOV waa qaab multimedia file ka kooban hal iyo ka badan oo kuwan raadkaygay xogta, sida audio, video ama qoraalka.
VOB - VOB (Video shay) files yihiin qaabab file DVD-Video ay ku jiraan digital video audio, audio, iyo subtitles la xiriira in DVD.
3G2 - Tani waa file weel video for audio, video, iyo qoraalka in uu yahay qayb ka mid ah MP4.
Tan iyo Chromecast kaliya taageeraa yar qaabab video, waxaa lagu talinayaa in aad hesho codsiga video hoorto in kuu ogolaanayaa inaad sii qulquli qaabab aqlka, sida M2TS, 3GP, DIVX, dhexena, RMVB, ASF, TS, DV, F4V, OGV, TOD. Wondershare Video Converter tusaale ahaan kuu ogolaanayaa inaad si ay u isticmaalaan si ay u sii qulquli Chromecast qaabab aqlka dhex your computer Windows aad television.
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo aad u sii qulquli karaan videos taageeray adiga oo isticmaaleya isticmaale Chromecast ciyaaryahan warbaahinta, laakiin halkan waxaad ku baran doontaa saddex ka mid ah hababka ugu caamsan ee la isticmaalo. Waxaad baran doontaa sida in ay ku xidhmaan isticmaalaya computer ah, qalab mobile, iyo iyada oo app YouTube ah.
1. Isku leh qalab aad Mobile
Si aad u sii qulquli videos la isticmaalayo qalab mobile, waxaad u baahan doontaa inaad kala soo baxdo oo la furo app Chromecast ku saabsan casriga ah ama kiniin Android ama arrimo la isticmaalayo Google Play ama dukaanka App. The app Chromecast loo heli karaa kiniiniga Android iyo casriga ah iyada oo loo marayo Google Play iyo iPhone iyo iPad dukaanka App.
Fiiro Gaar ah: Waa in aad loo hubiyo in qalabka mobile xiran yahay si aad Wi-Fi oo aan aad network mobile. Sidoo kale, waa in aad haysataa app ugu dambeeyay ee lagu rakibay oo noqon ku network la mid ah sida aad Chromecast ciyaaryahan warbaahinta dhijitaalka ah.
2. Isku aad Computer
Chromecast kuu ogolaanaya in aad sii qulquli videos on TV aad adiga oo isticmaaleya isticmaale Mac ama PC socda browser Chrome ah. Tani waa browser kaliya in Chromecast waa la jaan qaada. Raac tilmaamaha hoos ku qoran si xirmaan your computer.
Tallaabada 1. Open browser Chrome ku on your computer ka dibna falgali in this page si ay u arkaan sida loo Mudanayaasha Chromecast .
Tallaabada 2. Dwnload app Chromecast ah in aad damisid.
Tallaabada 3. Dooro edbinta hoos ku qoran waa in ay ku habboon si aad u computer.
i. On your computer Windows, Save faylka, Orod app Chromecast iyo raac dardar si ay u buuxiyaan samaynta Chromecast.
ii. On aad Mac OS X computer, jiididda iyo hoos u app Chromecast kaa gelin doonaa Codsiyada folder. Waxaad u baahan doontaa in la furo gal, ordo codsiga, ka dibna dooro qalab Chromecast ah. Raac tilmaamaha si aad u dhamayso Mudanayaasha.
3. Connect la YouTube
Raac tilmaamaha hoos ku qoran si download iyo Mudanayaasha YouTube si aad u daawato videos on TV adiga oo isticmaalaya qalab Chromecast.
Tallaabada 1. Isku qalab Chromecast in an HDMI booska laga heli karaa adiga oo HDTV.
Tallaabada 2. Marka aad Chromecast ciyaaryahan warbaahinta digitalka ammaan ku xiran in aad TV idin ​​arki doonaa shaashadda Chromecast Home la magacaaga Wi-Fi hoose ee shaashadda ah .
Tallaabada 3. Hadda, download app YouTube ku jira kiniinka Android ama Apple ama casriga ah.
Tallaabada 4. Isku qalab Android ama Apple shabakad isku Wi-Fi sida qalab Chromecast.
Tallaabada 5. Open app YouTube aad Android ama qalab Apple oo riix badhanka tuuraan si ay u bilaabaan hoorto videos.
Shaxda soo socota waxay bixisaa liiska shuruudaha hoorto videos taageeray isticmaalaya computer ah, YouTube, iyo qalab mobile.
Mac OS X 7 ama wax ka sareeya ama Windows 7 ama ka sare Android ama macruufka Android ama macruufka
iPad, iPhone, iyo Android casriga ah ama Tablet iPad, iPhone, iyo Android Phone ama Tablet
Wondershare Video Converter - Waxay bixisaa plugin awood loo yaqaan "Media Server" kaas oo kuu ogolaanaya in aad si toos ah u sii qulquli audio iyo video qaabab ay taageerayaan iyo aqlka u yihiin in la Chromecast.
Wondershare Codsiga DreamStream - DreamStream u ogolaanaya HD hoorto ka PC iyo kiniin ah in TV dhex Chromecast. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad sii qulquli muujinaya TV, filimada, iyo videos music leh qaab video in aad TV kasta.
RealPlayer Cloud - The app Real Player Cloud kuu ogolaanaya in aad sii qulquli aqlka videos in aad TV la your computer ama qalab mobile.
Shaxda soo socota waxay bixisaa liiska shuruudaha hoorto aqlka videos in TV adigoo isticmaalaya iDealShare video Converter, app RealPlayer Cloud, iyo Wondershare DreamStream.
Wondershare DreamStream Codsiga
MKV , AVI , MP4 , Apple ProRes, MOV, FLV , VOB, DAV, Mpg, MXF, AVCHD, WTV, wmv , ASF, RMVB MP4 , WebM, AVI , MKV , dhexena, RMVB, MOV, Mpg, VOB, FLV , wmv, ASF, TS, M2TS, 3G2, 3GP, DIVX, DV, F4V, MTS , OGV, TOD, TP, TRP FLV , wmv , MKV , DIVX, XVID, MOV, AVI , iyo MP4 .
LAC, DTS, AIFF, daanyeer, regelingen, WMA, Apple sameecadda ah, M4A, OGG, CAF AAC, MP3, WMA, daanyeer, FLAC, OGG, M4A, regelingen, AC3, MP2 Android ama macruufka
Mac OS X iyo Windows
$49.95 Lite Free, $4.99 mo. (Registered) App Free, $4.99 ilaa $29.99 mo. (25 ilaa 300 GB Storage)
Firefox, Chrome, Safari, iwm Dhamaan daalacashada (Firefox, Safari, Internet Explorer, Chrome, iwm) Dhamaan daalacashada (Firefox, Safari, Internet Explorer, Chrome, iwm)
Windows Tablet iPhone, iPad, kiniin Android oo smartphone
Dhammaadka maalinta, Streaming taageeray iyo aqlka qaabab video in aad TV la Chromecast aad si fudud u GAADHO mid ka mid ah hababka iyo qalab wada hadleen.
Sida loo Connect Android inay TV: U tag Phone ama Tablet Apps on Big Screen?
> Resource > Video > Sida loo sii qulquli Video Qaabka kasta Google Chromecast